Ndingaitei Kana Ndichirwara? (Chikamu 3) | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cambodian Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish Fon French Georgian German Greek Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kazakh (Arabic) Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ndingaitei Kana Ndichirwara? (Chikamu 3)
Kazhinji vanhu pavanenge vachiyaruka vanenge vaine simba rakawanda uye vari vatano. Asi vamwe vanonetseka nemhaka yeurwere. Ndizvo zvauriwo here? Kana zvakadaro, uchakurudzirwa nezvakataurwa naV’loria, Justin, naNisa avo vari Zvapupu zvaJehovha. Inzwa kuti vari kuzviitawo sei pasinei nematambudziko ourwere avainawo.
Ndakabatwa chirwere chefibromyalgia ndiine makore 14. Pandakazosvitsa makore 20, ndakanga ndavawo nearthritis, lupus, uyewo Lyme. Zvakaoma kuti uite zvose zvaunenge uchida kana uchigara uchingonzwa kupera simba. Pane dzimwe nguva muviri wangu waimbopera simba kubvira muchiuno zvichidzika zvokuti ndaitofanira kushandisa wiricheya.
Kutadza kuita zvinhu zviri nyore zvakadai sokunyora kana kuvhura bhodhoro rejemhu ndiko kwainyanya kundirwadza kupfuura urwere hwandaiva nahwo. Pandaiona vamwe vana vachifamba ndaizvibvunza kuti ko ini chinonditadzisawo chii. Ndaizviona sendisingabatsiri.
Ndinotenda kubatsirwa kwandakaitwa nehama dzangu uyewo nevandinonamata navo veZvapupu zvaJehovha. Vandinonamata navo vanowanzondishanyira uye zvinoita kuti ndisanyanya kusurukirwa. Vamwe vanondikoka kuti timbonofarawo nevamwe kunyange zvazvo zvisiri nyore kuti vandisimudze kubva muwiricheya vachindipinza kana kundibudisa mumota.
Vechikuru vatinonamata navo vanondibatsira chaizvo nokuti vanonyatsonzwisisa matambudziko anosangana nomunhu anenge achirwara. Vanondibatsira kuti ndisazvipa mhosva nokutadza kuita zvimwe zvinhu zvinoitwawo nevamwe. Pandinenge ndiri kumisangano yeungano nevamwe kana kuti ndichiita basa rokuparidza ndipo pandinonyanya kufara. (VaHebheru 10:25) Izvi zvinondibatsira kuona kuti pasinei nourwere hwandinahwo, ndakangofananawo nevamwe.
Ndinoziva kuti Jehovha anotipa zvatinoda kuti tigone kutsungirira. Somuenzaniso, Bhaibheri rinoti kunyange zvazvo nechokunze tiri kupera, nechomukati ‘tiri kuitwa vatsva zuva nezuva.’ (2 VaKorinde 4:16) Ndiri kunyatsoona kuti ndizvo zviri kuitikawo kwandiri!
Zvokufunga nezvazvo: Kana uine urwere huri kukutambudza, zvakanakirei kuti ushamwaridzane nevamwe? Kana uri mutano, zvii zvaungaitawo kuti ubatsire anorwara?​—Zvirevo 17:17.
Ndakadonha ndichibva ndatadza kusimuka. Chipfuva changu chairwadza uye ndaitadza kana kupfakanyika. Ndakamhanyiswa kuchipatara. Pakutanga, vanachiremba vakatadza kuona paiva nedambudziko. Asi zvakaramba zvichiitika kakati wandei uye ndipo pavakazoona kuti ndine chirwere cheLyme.
Chirwere ichi chakakanganisa mashandiro anoita tsinga dzinofambisa mashoko mumuviri wangu. Patova nemakore akawanda kubvira pandakabatwa nechirwere ichi, uye nanhasi chinondidederesa zvokuti dzimwe nguva ndinotadza kudzikama. Mamwe mazuva muviri wangu unenge uchirwadza kana kuti zvigunwe zvinenge zvichirwadza zvokuti ndinotadza kana kuzvifambisa. Zvinoita sokuti majoini angu akapfupfunyika.
Ndaiwanzozviudza kuti, ‘Ndichiri mudiki zvokuti handifaniri kurwara seizvi,’ uye zvaiita kuti ndiite hasha. Mazuva ose ndaichema kuna Mwari ndichiti, “Ndakaparei?” Ndakatombofunga kuti Mwari andisiya. Asi ndakazofunga nezvaJobho wemuBhaibheri. Jobho akanga asinganyatsozivi kuti nemhaka yei aisangana nematambudziko akawanda kudaro, asi akaramba akatendeka kuna Mwari. Kana Jobho akakwanisa kutsungirira matambudziko iwayo akakura, iniwo chii chinganditadzisa.
Vakuru vari muungano yedu vanonditsigira chaizvo. Vanogara vachindibvunza kuti vazive kuti ndiri sei. Mumwe wavo akandiudza kuti kana ndiine zvandiri kuda kutaura naye ndimufonere chero nguva. Ndinotenda Jehovha mazuva ose nokundipa hama dzakadai!​—Isaya 32:1, 2.
Dzimwe nguva patinenge tichirwara zvakanyanya, tinokanganwa kuti Jehovha ari kuziva dambudziko ratinaro. Bhaibheri rinoti: “Kanda mutoro wako pana Jehovha, iye achakutsigira.” (Pisarema 55:22) Ndizvo zvandiri kuedza kuita mazuva ose.
Zvokufunga nezvazvo: Hama neshamwari dzingakubatsira sei kuti utsungirire dambudziko rourwere raunaro?​—Zvirevo 24:10; 1 VaTesaronika 5:11.
Pandakanga ndava nemakore anenge 16, ndakabatwa nechirwere cheMarfan syndrome icho chinokanganisa mashandiro emajoini uye chichiita kuti asava nesimba. Chirwere ichi chinogonawo kukanganisa mwoyo, maziso uye dzimwe nhengo dzemuviri. Handirwadziwi hangu mazuva ose, asi pazvinondibata ndinoyuwira.
Mazuva andakaudzwa kuti ndicho chirwere chandiinacho ndaigara ndichichema zvisingaiti. Ndainetseka kuti ndinenge ndisingachagoni kuita zvinhu zvaindinakidza. Ndinofarira kujaivha, saka kufunga kuti rimwe zuva ndinogona kurwadziwa zvokutotadza kutamba kana kuti kufamba chaiko, zvaiita kuti nditange kunetseka.
Sisi vangu vakandibatsira chaizvo kuti ndisagara ndichingonetseka nezveurwere uhwu. Vakanditi ndikaramba ndichinetseka ndaitozowedzera kurwara. Vakandikurudzira kuti ndirambe ndichinyengetera, nokuti Jehovha chete ndiye anonyatsonzwisisa dambudziko rangu kupfuura mumwe munhu.​—1 Petro 5:7.
Vhesi inonyanya kundikurudzira ndiPisarema 18:6 inoti: “Ndakaramba ndichidana kuna Jehovha ndichitambudzika, ndakaramba ndichichemera Mwari wangu kuti ndibatsirwe. Akanzwa inzwi rangu ari mutemberi yake, kuchema kwangu ndiri pamberi pake kuti ndibatsirwe kwakabva kwasvika munzeve dzake.” Vhesi iyi yakandibatsira kuona kuti pandinonyengetera kuna Jehovha uye pandinokumbira kuti andibatsire, anondinzwa uye anondibatsira. Ndinovimba naye nguva dzose.
Ndakaona kuti hapana chakaipa nokumbonzwa kusuwa kana kunetseka nezvedambudziko ratingava naro nemhaka yokuti zvingori muvanhu kuti vanzwe kudaro. Asi hatizofaniri kuita kuti manzwiro iwayo azosvika pakutishayisa mufaro kana kuti kubva zvakanganisa ukama hwedu naMwari. Haasi iye anokonzera matambudziko edu uye haazombotisiyi chero bedzi tikaramba tichimunamata nemwoyo wose.​—Jakobho 4:8.
Zvokufunga nezvazvo: Tingati Mwari ndiye anokonzera matambudziko atinosangana nawo here?​—Jakobho 1:13.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndingaitei Kana Ndichirwara? (Chikamu 3)
ijwyp nyaya 46